AMAQHINGA angu-5 Okugcina Izibuko Zakho Zelanga - THE INDIAN FACE
Inicio / Izindaba /
Kuyiqiniso ukuthi, ngenxa yamanani athengekayo ezingilazi zekhwalithi esinawo emakethe namuhla, sifuna ukuba namamodeli amaningana ukuze sikwazi ukuba nokukhetha ukuwahlanganisa nokubukeka okuhlukile esikucabangela nsuku zonke futhi izimo zethu ezahlukene.
Kuphela kolunye lwemikhiqizo yethu, The Indian Face, sikunikeza amamodeli ezibuko afinyelela kwangu-19 okuthi, uma aphindaphindwa ngemibala ehlukahlukene ehlukene ngayinye ngayinye, enze ingqikithi yezinketho eziningi ezahlukene, ofuna ukuba nazo, ngentengo eyodwa nefanelekile ukuze unikeze ikhwalithi enhle, kokubili. kumalensi ukuze kuvikelwe amehlo akho, njengasezintweni eziwasekelayo futhi zihlobise ubuso bakho. Amalensi ezingilazi The Indian Face, bayi-TAC polarukuphakanyiswa kwencazelo ephezulu, ukuvikelwa kwekhwalithi engu-3 kanye nombani UV400 kanye nohlaka olwenziwe nge-polycarbonate olunikeza ukukhanya okuphezulu. Ukunikeza inani elingenakunqotshwa lemali emphakathini.
Ngazo zonke izinketho ezahlukene ezethulwa phambi kwamehlo ethu ngendlela yamamodeli ethu ahlukene, Alpine, I-Hookipa, Soul, Ushuaia, Valley, Free Spirit, Frontier, kahoah, Polar, Reef, I-Freeride, Ukuqubuka, Oxygen edition, Ventura, ISouthcal, Noosa, Kailani, Nunkui o TarifaKuhle ukuthola uhlelo oluhle lokugcina izibuko zakho ukuze zingawohloki futhi zigcine amakhono azo afanele, ngaphezu kokukuvumela ukuthi ube nazo ekubhekeni ukukhetha okungcono kakhulu ekuphileni kwakho kwansuku zonke.
Kokubili ekhaya nokuyihambisa emgwaqweni, sikunikeza izinketho ezilula, ukuze uzenzele ngokwakho. Futhi ukusuka ebunzimeni obuncane kuye kobukhulu, sizokutshela ngezansi imibono embalwa okufanele uyenze abahleli bezibuko zelanga abazenzela.
Kuwo wonke la maqhinga, uzobona ukuthi isibhamu esincane se-silicone esishisayo esisetshenziselwa ubuciko sizoba umsizi wakho omkhulu. Uma ungenayo, ungasebenzisa i-silicone ewuketshezi noma i-aphoyintimenti yaseMelika.
1. ISIHAMBI - ISIHAMBI SAMAGLASI
Isiphanyeko sokhuni noma yini oyithandayo.
Isibhamu esincane se-silicone esishisayo.
Indwangu yokuhlobisa noma i-trimmings tape.
Ungakhetha enye yeziphanyeko zakho ezinhle kakhulu zokhuni noma ngisho nalezo ezifakwe ngendwangu uma unayo, noma olunye uhlobo lwe-hanger oluthandayo. Ukuyihlobisa, namathela nge-silicone encane eshisayo emaphethelweni ebhande le-trimmings noma i-tape, endaweni ephansi kanxantathu eyakha i-hanger, engxenyeni ongafuni ukuyibona, bese ugoqa itheyipu eduze kwebha. ngaphandle kokushiya isikhala phakathi kwayo. Ungakwazi ukuhlobisa kuphela ingxenye engezansi lapho uzolenga khona izibuko noma yonke i-hanger. Okokugcina, lungisa isiphetho futhi nge-silicone engxenyeni efanayo olungise isiqalo, manje esizoba yingxenye yangaphakathi. Ngale ndlela sizoqinisekisa ukuthi iziphetho azibonwa. Ngenxa yalokho, uzokwazi ukulenga zonke izibuko zakho ethempelini futhi wenze zonke zibonakale kalula nokuthi ama-lens awaklwebheki. Ungayiphanyeka ekhabetheni lakho ngezingubo zakho, ekugcineni ukuze uyithole kalula, noma uyilengise odongeni njengomdwebo.
2. IDROWEBA LOKUHLELA - ISIHLUKO
Ibhola le-foam le-5 mm.
Isibhamu esincane esishisayo seglue noma i-silicone ewuketshezi.
Umqondo uwukuthulula elinye lamadrowa akho noma ingxenye yawo eyodwa, kuye ngezibuko ofuna ukuzihlela kanye nobukhulu bekhabethe lakho. Ngale ndlela, sizokala isikhala esifuna ukusishintsha sibe umhleli wezibuko zelanga futhi sizolungisa amakhadibhodi njengesisekelo esilinganisweni.
Bese siphinda sithatha izilinganiso zamaphethelo ekhadibhodi futhi sinqume izinhlangothi ezingu-4 ezidingekayo ukwenza i-contour ukuze ilinganise futhi inamathisele imile nge-silicone eshisayo noma ewuketshezi, ngoba eshisayo yoma ngokushesha. Sikhama imizuzwana embalwa ize yome.
Ukwenza abahlukanisi, sizokala futhi sisike ukuhlukaniswa okuphakathi ngobude bese sinamathisela ndawonye. Kufanele sibhekisise ukuthi zingaki ezilingana, ukukala ngezibuko ezifanayo esifuna ukuzibeka, kodwa ngokuvamile amasentimitha angu-6-7 phakathi kwezibuko nezibuko kwanele. Sizosika abahlukanisi ngosayizi ebhodini le-foam bese sibanamathisela futhi.
Sibeka sonke isakhiwo phansi kwekhabethe futhi, ngale ndlela, singakwazi ukusabalalisa izibuko.
3. UHLAKA - ITHEBULA
Umdwebo ongenalo uhlaka, uhlobo olubonwayo lwekhanvasi, okuvamise ukuba yisithombe esiphrintiwe, noma uhlaka lomdwebo ongasawusebenzisi.
Iribhoni ye-Satin yombala owuthandayo.
I-tape ye-duct noma i-silicone eshisayo.
Kuzodingeka ukubeka amateyipu anamathiselwe ngemuva kwefreyimu noma isithombe, asale eyisicaba nge-duct tape noma i-silicone eshisayo, ubeke amateyipu phezulu ukuze ubone ubude bawo obudingekayo ngaphambi kokusika nokulinganisa ukuthi umbukwane uthatha ini lapho ulenga ethempelini. ukuze ukwazi ukubeka itheyiphu elandelayo ngaphansi. Uma isiqediwe, izolenga kahle kakhulu odongeni, kodwa uma kuyindwangu engenalo ifremu ingase futhi isekelwe esifubeni samadrowa.
4. UKUBONISWA KWEZIglasi
Iziqukathi oziphindile nezilingana izibuko, kodwa ungathola ezishibhile kakhulu esitolo, njengalezo zebhotela, njengoba zivame ukuba nosayizi omuhle wokubeka izibuko zakho ngaphakathi.
Isisekelo onaso futhi uyathanda ukusenza isimeli sesibonisi, njengesibambi sekhandlela.
Lesi sikhathi simayelana nokuba nobuciko obuthe xaxa nokukhetha izinto ongathanda ukuthi zibonwe ekamelweni lakho.
Okokuqala sizohlanganisa iziqukathi ndawonye ngokuzibeka emgqeni naseceleni, sakha iphaneli eliphindwe kabili. Ukuzibeka zibheke phansi, sizobona uma zonke zithinta kusukela ngemuva futhi nge-silicone eshisayo sizokwenza amaphuzu ukuze bajoyine. Uma bengathintani ukuze bavale lelo banga, sizoqale sibeke inani le-silicone pea onqenqemeni ngalunye ukuze sihlanganise ibanga abangenalo ukulithinta futhi sizoliyeka lome ukuze liqine. Sizobe sengeza enye inani elilinganayo phezulu ukuze sibahlanganise ndawonye. Uma zonke zihlanganiswe ndawonye futhi i-silicone yomile, uma sifuna ukuhlobisa i-contour nge-strip yokuhlobisa, singayenza manje.
Kamuva, sizoyijoyina njengebhulokhi ekusekelweni kwethu esikhethiwe futhi nge-silicone. Uma somile, sizobe sesivele sinesitendi sokubonisa esihlotshisiwe nesimile esizohlala phezu kwetafula.
5. IKHAVA YERABHA KA-EVA UKUZE UPHATHELE IZIGLASI ZAKHO
Intambo ewugqinsi noma uvolo.
Ibhuloshi noma umumo oyisicaba esithanda ukuwuhlobisa ngokumaka irabha ye-Eva.
Ngomugqa ongu-40 cm ubude x 12 cm ububanzi werabha ye-eva, izokwanela ukufaka noma yiziphi izibuko zakho zelanga. The Indian Face.
Amapulasitiki anomumo ongunxantathu kufanele abe ngamasentimitha amabili ububanzi ngaphansi kunomugqa werabha we-eva kanye nesentimitha elilodwa nohhafu ububanzi. (Zingenziwa ngesivalo esidala se-tupper onayo). Udweba izilinganiso, izingcezu ezimbili zika-10 cm x 1,5cm noma 12cm x 1,5cm, bese uzisika. Uma ipulasitiki incane kakhulu, ungawasika kabili bese uwanamathisela nge-silicone eshisayo ndawonye, ​​ukuze unikeze ukumelana okwengeziwe lapho ucindezela ukuvula ikhava kusuka ezinhlangothini.
Sizonamathisela i-plastic strip emaphethelweni amabili wendawo encane, sishiye i-2 mm yesikhala kusukela emaphethelweni enjoloba ye-eva, bese siyigoqa futhi siyinamathisele ngaphakathi ukuze ipulasitiki ifihliwe.
Sizofaka i-silicone emaphethelweni amade ngesibhamu futhi sizogoqa engxenyeni eqondile ukuze ihlangane ndawonye.
Khona-ke sizohlobisa ingaphandle lekhava nge-clasp yensimbi noma inkinobho ngokukhululeka okuhle, ukufudumeza ngaphambili ngokushisa kwekhandlela kodwa ngaphandle komlilo ovuthayo noma ukuwenza ube mnyama. Kamuva sizoyigxiviza kukhava yenjoloba ye-eva, senze uchungechunge lwemidwebo eceleni bese wengeza imigqa uze ufike lapho ufuna.
Okokugcina, uma ufuna ukuyihlobisa kakhulu, ngenaliti yoboya kanye noboya obunemibala noma intambo ewugqinsi oyithanda kakhulu, qala ukuthunga ngaphansi kwendawo yepulasitiki. Fihla ifindo lokuthunga kokuqala kusuka ngaphakathi futhi ukusuka lapho 3 mm ukusuka onqenqemeni yonke indlela ezungeze ikhava uze ufike komunye umkhawulo ngaphambi nje kwezingcezu zepulasitiki.
Uma usuqedile, ungavula ikesi futhi uthathe izibuko ozifisayo esikhwameni sakho ngaphandle kokulimaza, noma ukuthatha indawo eningi kakhulu ikesi eliqinile.
Manje usunalo lonke uchungechunge lwemisebenzi yezandla ejabulisayo neqhubekayo eqinisekisa ukunikeza izibuko zakho ozithandayo impilo ende futhi ezokuvumela ukuba uzihlele ngokuphelele futhi usondele. Sikukhuthaza ukuthi uwazame ukuze ukhombise ukuthi uzenzele wena.
UZIZINAKEKELA KANJANI Izibuko Zakho Zelanga?
Ukuze ugcine izibuko zakho zisesimweni esikahle, kufanele ube namalensi ahlanzekile, uma kungenzeka anoketshezi oluthile lokuhlanza amalensi ezingilazi noma, uma ungenayo, nge-cologne. I-cologne iwashiya ehlanzekile ngaphandle kokuwohloka, asetshenziswe ngendwangu ecolekileyo ye-microfiber yezingilazi, njengoba amaduku nama-napkins aqukethe ama-microparticles engilazi angawanwaya uma ukusetshenziswa kuqhubeka isikhathi eside. Lapho zingcolile kakhulu, zigeze ngokuqondile ngamanzi nangensipho ethambile. Ithawula libuye libe yindlela enhle yokomisa kuleso simo.
Uma ungawasebenzisi, kufanele uwagcine kumhleli noma ecaleni ukuze amakristalu angaklwejwa, noma abhekane nezingozi.
Ungalokothi uzigqoke zilenga emgqeni wentamo, ngoba ukusuka lapho ziyawa futhi zingaphuka, kulezi zimo amakristalu aqotshwa kalula. Ungawagqoki ekhanda lakho, njengoba engcolile futhi ubambe izinwele zakho.
UNGAWANAKEKELA KANJANI AMEHLO AKHO?
Ukudla kahle kubalulekile empilweni yamehlo. Ukudla kwaseMedithera kukuthanda kakhulu lokhu kudla okulungile, ngakho sebenzisa ngokunenzuzo futhi ugcine engqondweni ukudla okufana nalokhu: amafutha omnqumo, imbewu kabhekilanga nobhontshisi wesoya, upelepele obomvu, amawolintshi, amaqanda, i-broccoli, izaqathe, amantongomane, inhlanzi eluhlaza okwesibhakabhaka, nemikhiqizo yobisi. Konke lokhu kudla kucebile ngamavithamini A, C, D, futhi kuvimbela ukuwohloka kwe-macular okuhlobene neminyaka, okuhambisana nesifo sikashukela, okuyizimbangela eziyinhloko zokulahlekelwa umbono.
Ukuba nempilo enhle evamile nakho kubaluleke kakhulu, ukugwema ukukhuluphala ngokweqile, umfutho wegazi ophakeme noma i-cholesterol ephezulu. Ukuvivinya umzimba njalo okuklanyelwe izidingo zethu kuyasiza ukubavimba.
Gqoka izibuko zelanga ezisezingeni eliphezulu njengalezi esikunikeza ngazo The Indian Face kuyohlale kuyinketho engcono kakhulu.
YIMIPHI imikhuba ENGAYONA AMEHLO ETHU?
- Ukweqa ukudla, ikakhulukazi kwasekuseni, ngoba izinga likashukela egazini liyehla.
- Nquma ukudla okulula phakathi kokudla, ngoba kunikeza ama-calorie angenalutho.
- Ukusebenzisa kabi ushukela ocolisisiwe noma amafutha agcwele.
- Ukungatholi ukuphumula ngokwanele, ngoba kubangela ukukhathala kwamehlo.
- Phuza utshwala, ngoba kunciphisa ukujikeleza kwegazi.
- Ukudla ngokushesha kakhulu, ngoba akukuvumeli ukuthi uhlanganise kahle ukudla.
NGINGAZIHLELA KANJANI Izibuko ZAMI?
Ukuze ugcine izibuko zakho zelanga zihlelekile, kunemibono elula efana nokulengiswa ku-hanger ekusiza ukuthi ugcine izibuko zakho zingaboli futhi uzigcine zibonakala.
Ukuthulula idrowa nokwenza isikhala sokuwahlela nokuba nawo wonke amamodeli akho abonakale kuyinketho enhle.
Okuningi kwe: Ulwazi noLwazi
I-FLASH INIKELA ngamahora angu-24
Born to Windsurf Okuluhlaza okotshani nokubomvu
Tarifa Omnyama / Olubomvu